Zvese nezve 3D Kudhinda - Yemahara Hardware | hardware yemahara
Kuwedzera kugadzirwa kune kwakawanda uye kwakawanda minda yekushandisa, mune yekuzorora chikamu uye muindasitiri uye tekinoroji. The 3D kudhinda ndiyo yazvino, uye ramangwana rayo rinotaridzika kupenya kugadzirisa matambudziko ayo kusvika zvino aisagona kuitwa nedzimwe nzira dzakajairwa dzekugadzira. Uye zvakare, iko kuwanikwa chaiko kune vanoda DIY nevagadziri, saka iwe unofanirwa kuziva zvese nezvavo.
Mugwaro rino iwe unogona kudzidza kubva kune yakapusa kusvika kune yakaoma kwazvo. Kufanana nevoxel unit, ichienda nechikonzero nei iri 3D printer uye kuti inoshanda sei, zvishoma zvenhoroondo yayo, matanho ekugadzira emamodheru kusvika modhi yadhindwa, ichipfuura nesoftware inodiwa, matanho ekugadzira ekuwedzera, uye zvinogoneka zvikumbiro (indasitiri, dzidzo, kutandara, hunyanzvi, mushonga, ...).
STL uye mamwe mafomu efaira
Ruzivo nezve STL fomati uye mamwe marudzi emafomati emhando dzekudhinda, pamwe nekushandurwa kunobvira, uye software inodiwa.
Mhando dze 3D printers uye maitiro avo
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve hunhu hweimwe neimwe yemhando dze 3D printers zviripo: matekinoroji, zvakanakira uye zvakaipira zvega ega, zvese izvo zvekushandisa mudzimba uye izvo zvehunyanzvi uye maindasitiri ekushandisa, bioprinters, 3D mapenzura, nezvimwe.
Ungasarudza sei 3D printer
Paunenge uchida kusarudza timu nyowani kusahadzika kwakawanda kunomuka, uye mugwaro iri ungasarudza sei 3d printer unogona kubvisa kusava nechokwadi kwako. Iwe unozodzidza izvo zvaunofanira kufunga nezvazvo kuita sarudzo yakanaka zvinoenderana nezvaunoda iwe, huru tekinoroji maitiro efilament, resin, uye maindasitiri e3D anodhinda, mamwe masevhisi ekudhinda 3D, mitengo, maitiro ekuisa printer uye matanho ekutanga. kutanga kudhinda.
Ndeipi yakachipa 3D printer yekutenga
Mamwe mazano e mhando uye mhando dzeakanakisa zvakachipa 3D maprinta Chii chaunogona kutenga
Ndeipi 3D printer yekumba yekutenga
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chemba chine maficha akanaka, asi pasina kudhura, hezvino unoenda mazano akanakisa ye 3D printers yevagadziri uye hobbyists.
Zvimwe zvacho yakanakisa resin 3D printer mhando uye mhando kuti urege kukanganisa pakusarudza, kune izvo izvo filament izvo hazvina kukwana.
Kana iwe uchizoishandisa nehunyanzvi pakufonera kana uine kambani uye unoda indasitiri ye3D printer, hezvino zvimwe zvezvakanakisa.
Filaments ye3D printers uye resins
Sezvakangoita mumaprinta akajairwa iwe unofanirwa kutenga inki cartridges uye toner, mune 3D maprinta iwe unozoda imwe mhando ye zvinodyiwa, senge filaments uye resins. Heano mamwe kurudziro kune izvi zvigadzirwa uye zvese zvinhu zvaunogona kudhinda pazviri.
Spare parts for 3D printers + kugadzirisa uye kugadzirisa gwara
Tsvaga zvikamu zvose zvaunoda kune yako 3D printer: zvitsigiro, mibhedha, PEI masheets, thermal paste, extruders, nozzles, PTFE machubhu, stepper motors, magetsi, mabhandi enguva, pulleys, bearing, thermistors, kutonhora, mafuta ekuzora, marambi, resin matangi, nezvimwe. Mukuwedzera, iwe uchakwanisawo kudzidza kuchengetedza 3D printer (calibration, kuchenesa, ...) uye zvose zvinogoneka matambudziko uye mhinduro dzavo.
Heano mamwe acho akanakisa 3d scanners iyo iwe yaunogona kuwana kune yako nyanzvi kana yevaraidzo mapurojekiti, kuitira kuti iwe ugone kutumira chero chiitiko kana chinhu kune yedhijitari 3D fomati kuti uidhinde pa 3D printer yako, ubatezve, nezvimwe. Iwe zvakare unozogona kudzidza maitiro ezvishandiso izvi, mhando, nzira yekusarudza iyo yakanyanya kufanira iwe, nezvimwe.
ari 3D printers ine huvepo huri kukura munharaunda medu uye hapana mubvunzo kuti iyo 3D kudhinda iri kuwedzera. Muchikamu chino uye kuburikidza nezvinyorwa zvedu tichaenda kukupa inonakidza nhau nezve mhando iyi yemaprinta uye kudhinda, semuenzaniso kusarudza mudziyo wekutenga kana kudzidza kuishandisa. Kana iwe uchida ruzivo nezve 3D kudhindaZviitise wakasununguka nekuti wasvika pane yakanak saiti padandemutande kuti uwane uye zvakare udzidze mazana ezvinhu.
kubudikidza Isaac inoita 1 mwedzi .
Kana iwe uchitsvaga yakanaka resin 3D printer, mugwaro iri uchaona mamwe anokurudzirwa mabhureki uye modhi uye…
Pamusoro pekukwanisa kuzvigadzira iwe geometry yechidimbu chaunoda kudhinda pa 3D printer yako uchishandisa software,…
kubudikidza Isaac inoita 2 mwedzi .
3D maprinta ane matambudziko uye nekuputsika senge chero mimwe michina, saka iwe unofanirwa kuziva maitiro ekugadzirisa kwakaringana ...
Toners uye inki cartridges ndizvo zvinodyiwa zve 2D maprinta, zvisinei, 3D maprinta anoda mamwe…
Kuwedzera kugadzira kwave chimwe chezvinhu zvinonyanya kuvimbisa muindasitiri yeindasitiri. Iyi mhando yekugadzira ...
Isu takamboratidza kurudziro pamaprinta akachipa, asi… ko kana uri kutsvaga chimwe chinhu chiri nani? Saka, mune chimwe chinyorwa ichi ...
Kana iwe uchida 3D kudhinda, iwe zvechokwadi uchada kuziva zvakawanda nezve Octoprint chirongwa. Kodhi software...
kubudikidza Isaac inoita 3 mwedzi .
Kune akawanda uye akawanda mabhureki nemhando dzeakachipa 3D maprinta, saka zviri kuramba zvichinetsa kusarudza...
Ultimate Guide: Maitiro Ekusarudza A 3D Printer
Kana kusahadzika kunokurwisa kana uchitenga, hapana chinhu chiri nani pane kuziva akanyanya kukosha maitiro uye…
STL mafaera: Zvese zvaunoda kuti uzive nezve fomati iyi uye dzimwe nzira dzayo
Kana iwe wakapinda munyika ye 3D kudhinda, zvirokwazvo wakazviona munzvimbo dzinopfuura imwe ...
Muchinyorwa chakapfuura takagadzira rudzi rwesumo kune nyika ye3D printers. Ikozvino chave chijana che...
Tresdpro R1, nyanzvi yekudhinda yeSpanish mavambo
Isu tinoongorora iyo PLA 3D850 uye 3D870 kubva kuSpanish inogadzira Sakata3D
Isu tinoongorora zvakanyanya kusanzwisisika mafirita eSmart materials 3D
Maitiro ekugadzira yako 3D printa nekukurumidza zvakanyanya pasina kurasikirwa neprinta mhando
Isu takaongorora PLA CARBON kubva kuFFFWORLD, filament yegumi
Prusa i3 MK3, iyo nyowani nyowani kubva kuna Josef Prusa
Ivo vanogadzira hofori 3D scanner nekuda kweRaspberry Pi
Pfeka Raspberry yako Pi nezviitiko zvepakutanga izvi
Qlone, yakasununguka yemahara 3D scanning application
Scanner kuongorora kweXYZPrinta 3D scanner
Gungano uye Kuongorora kweiyo 3D purinda muKIT BQ Hephestos
Wanhao Duplicator 3 7D Printer Ongorora
Fidget Spinner, toyi yatinogona kuvaka
Isu tinoongorora FFFworld filaments: Flexible, PETG, ABS, Metal uye PLA
Kuongorora kweiyo 3D purinda Legio kubva kuSpanish mugadziri Leon 3D
Gadzira yako wega Arcade mutambo muchina nekutenda kune 3D kudhinda
Ongororo yakazara uye kuyedzwa kweiyo BQ Witbox 3 2D purinda
Ivo vanogadzira 3D printer ine yekare kofi inogadzira uye yeArduino bhodhi
Neichi chishongedzo cheLeon3D unogona kushandura yako 3D printa kuita mucheka uye engraver